Cristiano Ronaldo oo ka hadlay kulan ​​taariikhi ahaa ee uu la yeeshay halyeeyga Michael Jordan – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo ka hadlay kulan ​​taariikhi ahaa ee uu la yeeshay halyeeyga Michael Jordan
(Yurub) 24 Juunyo 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay wuxuu soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka sawir ay si wada jir ah isaga qaadeen isaga iyo halyeeyga kubadda kolayga Mareykanka ee Michael Jordan.
Cristiano Ronaldo oo la kulmay Michael Jordan, ayaa soo dhigay sawir ay ku mideysan yihiin boggiisa Instagram-ka wuxuuna soo raaciyay qoraal ah:
“Waxaan sameynay taariikh”.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” oo sharaxaad ka bixinayay sawirkan ayaa wuxuu ka hadlay tirada koobabka iyo rikoorrada ay ka sameeyeen kubadda cagta iyo kubadda kolayga labadan halyeey.
Cristiano Ronaldo ayaa awooday inuu ku guuleysto 5 jeer abaal marinta Ballon d’Or waana rikoor aad u weyn ee gaar u ah waxayna ka siman yihiin Lionel Messi, sidoo kale xiddiga reer Portugal ayaa ah gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda ee tartanka Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, Michael Jordan ayaa wuxuu ku sugnaa caasimadda Faransiiska ee Paris todobaadkii la soo dhaafay si uu kaga qeyb galo Isbuuca isdhex galka ee raga, gaar ahaan xili shirkada Nike ay si gaar ah u taabo galiso labadaban shaqsi.
Nedved Oo La Kulmay Raiola & Xaalka Juve iyo De Ligt Halka Uu Maraayo.
Goormee Ay Chelsea Ku Dhawaaqi Doontaa Frank Lampard?